Soo dejisan Rainmeter 4.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Rainmeter
Rainmeter – software ah in uu soo bandhigo qaab ciyaareed nidaamka iyo design of desktop. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u aragto qaddarka isticmaalay oo lacag la’aan ah xasuusta, lacagta of disk iyo xusuusta dalwaddii, garaafka load ee processor dhexe, taariikhda hadda iyo waqti, macluumaad ah ee cimilada iwm Rainmeter u saamaxaaya in ay arkaan macluumaadka shabakadda, oo ay ku jiraan IP iyo cinwaanka DNS, gaadiidka iyo xawaaraha isticmaalka channels. Software ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si aad u hubiso waxyaabaha uu jiidho, ee cajalado of news arkaan iyo xakameeyo ciyaaryahan warbaahinta. Rainmeter ku jira qalab badan oo ay ku Customize awoodaha ka mid ah software iyo design of desktop.
Bandhigga ee waxqabadka nidaamka
Kartida aad ku qorshayso desktop
Soo dejisan Rainmeter
Faallo ku saabsan Rainmeter
Rainmeter Xirfadaha la xiriira